Izindaba - Fall 2021: Corpus Christi Festival, Pumpkin Field, Haunted House
Yize eminye imisebenzi ikhanseliwe noma ihlehlisiwe ngenxa yobhadane oluqhubekayo lwe-COVID-19, asekhona amathuba amaningi okuphuma kuma-bend asogwini. Bona uhlu olungezansi lwemikhosi, amasimu amathanga nezindlu ezihaunted ezizungeze le ndawo. Ingabe ikhona imicimbi engezwe? Thumela imininingwane nge-imeyili ku-firstabhouse@lidajituan.com.
Ini: ISonto Lokuqala LamaMethodist ePortland lokhu kuwa kukumema ubuyele esiqeshini! Thola ithanga lakho futhi ujabulele imicimbi ekhethekile kusuka ngo-Okthoba 1 kuya ku-31. Imali etholakele izosiza uMnyango Wezokwakhiwa Kwezindlu.
Ini: UGrace UMC umeme umphakathi emkhakheni wabo wamathanga, lapho isiko lomndeni lokwenza ithanga elilodwa ngasikhathi sinye
Ini: Amathanga ezinhlobonhlobo nobukhulu obuhlukahlukene ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho. Uhambo lwesikole nokunakekelwa kwezinsuku luyatholakala uma ucelwa.
Okuqukethwe: Lesi siqeshana samathanga saminyaka yonke sizuzisa uMnyango Wezingane waseSt.
Okuqukethwe: Insimu yethanga yaminyaka yonke ye-Asbury UMC ibuyile, ithengisa izinkulungwane zamathanga namathanga. Khetha ithanga bese uthatha izithombe ezinhle zonyaka.
Indawo: Asbury United Methodist Church, 7501 S. Staples St. (ekhoneni leStaples St. neYorktown Blvd.)
Okuqukethwe: Kule nkathi ye-Halloween, vakashela indlu ene-haunted yeBoogeyman Haunted House ukuze ufunde ngezinto ezihehayo ezahlukahlukene ezizokwenza ukuthi umemeze. Lokhu akuyona indlu ejwayelekile ehaunted, futhi ngokuqinisekile ayifanele izinhliziyo ezethileyo. Ukubaluleka komlando wendawo esikuyo kusho ukuthi lapho ngesibindi weqa iBoogeyman's Closet uye endaweni yethu eyinhloko nezinye izingosi ezesabekayo, uzoxubana nabaphilayo nabangafundile. Indlu ehaunted ilungele abasebenzisi besihlalo sabakhubazekile; izingane kumele zihambisane nomuntu omdala futhi zikwazi ukuzihambela zodwa.
Isikhathi: NgoLwesihlanu nangoMgqibelo kusuka ngoSepthemba 24 kuya ku-Okthoba 30 kusuka ngo-7pm kuya phakathi kwamabili, nangeSonto, ngo-Okthoba 31 (kusuka ngo-7pm kuya kumuntu wokugcina emgqeni we-Halloween).
Okuqukethwe: "I-Haunted House of Fright Night" izobuya ngo-2021. Cabanga nje ukuthi kuzwakala kanjani ngaphambi kokuthi uvuke ngokungazelelwe kulephupho lakho elibi kakhulu. Manje cabanga lo muzwa ngesikhathi sakho sonke sokuhlala ehhotela elihanjisiwe. Amathikithi ale sizini anqunyelwe futhi angathengwa kuphela ku-inthanethi, ngakho-ke sicela uthenge ngaphambi kokuba athengiswe!
Izindleko: US $ 20 wamathikithi ajwayelekile, US $ 30 wamathikithi weqa emgqeni, US $ 40 wamathikithi e-VIP weqa emgqeni (ukuthengiswa okuku-inthanethi kuphela, izinsuku zizothengiswa)
Okuqukethwe: Izitezi ezimbili, amakamelo angama-85, izilo ezingaphezu kwekhulu ubusuku ngabunye ziletha ukwethuka okungalindelekile. Uhambo olwesabekayo luthatha imiphefumulo enesibindi iye emphemeni yesibili neyesithathu yomgibeli wezindiza wesikhathi seMpi Yomhlaba Yesibili, esikhaleni esingakaze sivulekele umphakathi. Kufanele uzilungiselele ukubhekana nezitebhisi eziwumqansa, amaphaseji amnyama, ama-creaking hatches nokubukwa okungacabangeki, ukukhala nemisindo. Lokhu kungukuhlangenwe nakho okunamandla-ngicela ucabange kabili ngaphambi kokubhalisa! Iminyaka eyi-10 nangaphezulu, kufanele ikwazi ukuhamba ngezitebhisi nezikhala ezivalekile (kufinyeleleke kuzo izihlalo ezinamasondo).
Okuqukethwe: Hlola i-maze yethu enkulu yommbila bese ukhetha ithanga eliphelele esiqeshini sethu samathanga. Jabulela okuhehayo kwethu okuningi, njengamasilayidi, imidlalo yangemuva, izilwane zasemapulazini, izitimela zezinkomo, ama-aphula blasters nokuningi! Ungakhohlwa ikhamera yakho ukuze ukwazi ukuthatha zonke izithombe zasekwindla ezungeze ipulazi. ulambile? Sinezaphulelo ezungeze ipulazi, siphuza iziphuzo nokudla okumnandi, njengama-burger, izinja ezishisayo, ushizi owosiwe, ulamula, amanzi e-ice, amanzi e-soda, njll.
Izindleko: ithikithi jikelele eliku-inthanethi ngama-dollar ayi-13.95 aseMelika, umnyango ungamadola ayi-18.09 ase-US; ISuper Pass (ifaka amathokheni ama-2, angasetshenziselwa i-Apple Blaster kanye / noma i-paintball 21.95 US dollars online, 26.63 US dollars emnyango
Okuqukethwe: Izwa okujwayelekile kulokhu kuvakasha kwezipoki okungumlando, uhambo lwamahora amabili phakathi kwedolobha iCorpus Christi. Qondisisa izinhlobo ezahlukahlukene zosizi nokubonakaliswa. Vakashela izindawo ezihanjelwe futhi ulalele umlando, izinganekwane kanye nomlando wendawo ngayinye. Funda kabanzi mayelana nokwedlule kwe-Old Corpus Christi futhi ulalele izindaba zezipoki ezikubuyisela umhlane. (Uhambo alungeni esakhiweni).
Indawo: Hlangana endaweni yokupaka iCorpus Christi Museum of Science and History, ngo-1900 iN Chaparral St.
Okuqukethwe: ICoastal Bend Pride Center ibonisa isibonisi esincane se-altare seDía de los Muertos. Amalungu omphakathi we-LGBTQIA + nomphakathi bayamenywa ukuthi babambe iqhaza kulolu suku ukukhumbula abathandekayo bethu abangasekho futhi sibahloniphe nge -renda (i-altare) elincane. I-Ofrendas ingenziwa ebhokisini lezicathulo elincane noma esitsheni esilinganayo futhi ihlotshiswe ngezithombe zabathandekayo bazo, kanye nokudla abakuthandayo, ama-trinket, izimbali, njll. Izethulo zizokwamukelwa eCoastal Bend Pride Center ngo-Okthoba 26.
Isikhathi: Izethulo zamukelwa ngaphambi kuka-Okthoba 26; Isikhathi sokubuka uLwesine, Okthoba 28, uLwesihlanu, Okthoba 29, noMsombuluko, Novemba 1 kusuka emini kuya ku-3 ntambama
Ini: I-Aurora Art Theatre yethula i- "Rocky Horror Show" kaRichard O'Brien. Lesi satire somculo sihlonipha inkathi yamafilimu we-cinematic horror movie kanye nefiction yesayensi. Ukushaywa yisondo esivunguvungwini kufaka uBrad noJanet abangenacala abangenacala enkingeni. Bafuna isiphephelo esithabathabeni sendlu eyisimanga kasosayensi ogqokile obizwa ngokuthi uDkt Frank-n-Furter. Ngokudansa nangokucula ngokucophelela, waveza indalo yakhe yokugcina.
Isikhathi: Okthoba 8 kuya kuNovemba 6, ngoLwesihlanu ngo-7: 30 ntambama, ngoMgqibelo ngo-7: 30 ntambama nango-11 ebusuku; Okthoba 31 (ngeSonto) ngo-7: 30 ntambama
Ini: IRialto Theatre iveza "umoya wenjabulo" kaNoel Coward. Isangoma sabamba umhlangano wokuzinikela wombhali owaphazanyiswa ngumbhali, kepha ngokungalindelekile wabiza umoya womkakhe wokuqala ongasekho, okwenza unxantathu wothando nonkosikazi wakhe wamanje, owayeseshade iminyaka emihlanu, waba nzima kakhulu.
Okuqukethwe: Umhlangano wonyaka we-10 kaThomas J. Henry Bark ePaki uzoba ku-inthanethi kuphela ngo-2021. IPet Clothing Photo Contest izovulwa ngokusemthethweni emini ngoMsombuluko, Okthoba 4. Imali yokubhalisa ingu- $ 5. Yonke imali izosetshenziselwa ukutakulwa kwezilwane zasekhaya okulandelayo: ITexas Animal Defense League, iSan Antonio Pet Alive, iPeewee's Pet Adoption, iGulf Coast Humane Society, iMission Pawsible neShelterAMutt! Umncintiswano wezithombe zeBark in the Park uvuleleke kubo bonke abahlali baseMelika. Ukuphela kokufanele ukwenze ukubhalisa isilwane sakho emncintiswaneni wezithombe, bese wabelana ngokungenile kwakho nomndeni wakho nabangane. Abaqhudelana phezulu abangama-30 abanamavoti amaningi bazowina imiklomelo efinyelela kuma-US $ 2,500.
Okuqukethwe: Kusukela ku-gumbo elimnandi kuya emncintiswaneni wenkalankala ophilayo, lo msebenzi ogxile emndenini usuyintandokazi kuwo wonke umuntu eSouth Texas. Imisebenzi yezandla nabathengisi bemakethe beSeafair bazosingatha abahlinzeki abangaphezu kuka-120! Buka ukusebenza komculo bukhoma yi-Spazmatics ngoMgqibelo! Uyawathanda ama-adventures amanzi? Bhalisela umjaho wesikebhe wamakhadibhodi omnandi nohlanyayo. Kukhona imidlalo efanelekayo yonke iminyaka. Okungafanele kuphuthelwe umjaho we-crab ophilayo enkundleni yomjaho wokhuni, ukujoyina ubumnandi noma njengesibukeli nje. NgeMigqibelo, uzokujabulela ukubuka isitimela seSeafair esizungeze izinkundla zomkhosi eduze netende lezingane. Thatha uhambo lokuhambahamba embukisweni wemoto ngeSonto. Cishe ngo-1 ntambama ngeSonto, letha i-dessert noma i-salsa oyikhonzile yomdlalo osheshayo esiteji seTende Elikhulu. Abahlanganyeli badinga ukufika ngaphambi kuka-12: 30 ntambama
Okuqukethwe: Joyina iSouth Side Farmers Market ukuze ubambe iqhaza emakethe yezandla ekwindla yonyaka. Njalo ngonyaka babamba imakethe yabalimi enwetshiwe lapho ungathenga khona kuphela kubalimi bakho obathandayo, kodwa nakubachwepheshe bendawo.
Indawo: Corpus Christi South Farmers Market, Everhart Market Mall, 5800 Everhart Road
Okuqukethwe: Joyina i-United United Methodist Church ePortland, ubambe iqhaza emidlalweni enamathanga efana ne-pumpkin bowling, ithanga tic-tac-toe, nemisebenzi efanele yonke iminyaka! Uzothola imivuzo ngokuqedela umdlalo.
Okuqukethwe: I-CC Movie Night enikezwe yiReliant ibuyela esikrinini esikhulu seWhataburger Field ngo-Okthoba wonke, iletha uchungechunge lwama-blockbusters kuwo wonke umndeni. NgoMgqibelo, ngo-Okthoba 9, ibhayisikobho edumile kaPstrong ethi “Moana” izotheleka ngomkhumbi olungele umndeni. Okulandelayo, lungela i-adventure ezolethwa yiNdlovukazi u-Elsa noPrincess Ann e-Whataburger Field e "Frozen II" ngoLwesihlanu, Okthoba 15. Bese ugqoka izicathulo zokudansa ze- "Coco" kaPstrong ngoMgqibelo, Okthoba 23. Ekugcineni, ngoLwesine, Okthoba 28, cwilisa emoyeni wesipoki ku-Disney Halloween classic "Hocus Pocus". Izihlalo zivulekile ngaphandle kweWhataburger Field, izitsha zokuhlala. Ukudla neziphuzo zesitediyamu sendabuko kuzotholakala ukuze kuthengwe.
Isikhathi: Iminyango ivulwa ngo-6: 30 ntambama, bese i-movie iqala ngo-7 ntambama; NgoMgqibelo, Okthoba 9, ngoMgqibelo, Okthoba 15, ngoMgqibelo, Okthoba 23, nangoLwesine, Okthoba 28
Okuqukethwe: Gubha impilo enempilo futhi udle ngendlela yokuphila esuselwa ezitshalweni! Lo mkhosi yisikhathi sokubungaza nokukhuthaza ukudla kwezitshalo, amalungelo ezilwane kanye nokusimama kwemvelo. Kuzoba nabaphakeli abaningi. Ukudla okuningi kwezitshalo. Futhi kumnandi kakhulu! Jabulela umculo, izipikha nemiboniso yokupheka.
Okuqukethwe: ITexas Sandfest umcimbi womndeni wezinsuku ezi-3 oheha umhlaba wonke oheha ababazi bemifanekiso namashumi ezinkulungwane zabavakashi abavela kuwo wonke umhlaba baye ePort Aransas minyaka yonke. Sijoyine kulo nyaka futhi uhlanganyele kokunye okubaziwe okumangalisayo kwesihlabathi, ukudla, umculo obukhoma, imisebenzi yezingane-futhi uthenge ubucwebe, ubuciko, okokugqoka, ifenisha, izikhumbuzo, njll endaweni yabahlinzeki.
Izindleko: US $ 15 yabantu abadala, US $ 5 ezinganeni ezineminyaka engu-6-12, futhi mahhala iminyaka engu-5 nangaphansi. Ukudlula kwezinsuku ezintathu (ukudlula kosuku olulodwa akutholakali)
Okuqukethwe: Thola i-Autumn Happy Pack kwaFuntrackers. Izihambeli zizokwamukela ikhadi lokudlala elingama- $ 10, ithanga ensimini yamathanga futhi zivakashele isiteshi somhlobiso esenzelwe wena ukufaka i-laboratory kaDkt Tripenfall, lapho izivakashi ezisencane nabazali bazo bangavakashela khona ilebhu ethokozisayo. Futhi khetha okuhehayo futhi ube nethuba lokuwina ithikithi lelotho lamakhadi okudlala we-50 USD namathikithi e-lotto ayi-1000.
Ini: IGrace United Methodist Church imema imindeni ukuthi ibambe iqhaza kulo mkhosi wokuwa kanye nemithwalo yezingane noma ukungenisa izihambi. Kuzoba nabathengisi bendawo abazonikela ngezipho zamaholide neziteshi zokuqoshwa kwamathanga. Izingane zingajabulela iTrunk noma iTrans ngokusebenzisa imidlalo nemiklomelo, umculo weholide, ukudweba ubuso, ukushaya izindlu nemincintiswano yemvunulo. Insimu yamathanga nayo izovulwa.
Okuthi: ISouth Texas Food Truck Festival igubha umcimbi wayo omkhulu kunayo yonke @ Whataburger Field, enamaloli okudla angama-30 anikela ngezitsha zokudla nokudla okudliwayo kwawo wonke umuntu.
Okuqukethwe: Joyina iSonto Lokuqala Lase-Portland ePortland futhi ujabulele ubusuku nomculo nama-movie ePumpkin Field! Ibhendi yasePortland yasekuqaleni iThe East & The Crow izongena ePortland Pumpkin Patch, ilandelwe ngamabili athi “It's The Great Pumpkin Charlie Brown”. Amaloli okudla azophinde anikezwe usuku lonke. Umculo uqala ngo-5 ntambama, bese i-movie iqala ngo-7 ntambama nango-8: 15 ntambama. Letha ingubo noma isihlalo.
Okuqukethwe: Joyina iLa Palmera bese ubungaza impilo nokufa ngomculo, imidlalo nemiklomelo. Izihambeli zingajabulela umculo obukhoma ovela eLos Mariachis, amasampula kabhiya avela ku-L & F Distributors (aneminyaka engama-21 nangaphezulu, kuyilapho amasheya asekhona), iCorpus Christi Loteria neGrito Contest. Amakhadi wegeyimu weLoteria azonikezwa etafuleni lokubhalisa lamaLafera aseLa Palmera ngokuza kwabantu abafika kuqala. Umncintiswano uqale ngo-6 ntambama njengengxenye yesiko elide laseMexico, kanti iLa Palmera iphinde yamema umphakathi ukuthi uze nesithombe esizokhonjiswa kusuka ngo-Okthoba 3 kuya kuNovemba. 2 I-Ofrenda yakhiwe futhi yahlotshiswa yi-K Space Contemporary, eseduze ne-concierge. Izithombe zingathunyelwa enkulisa yezimoto ngesikhathi samahora okusebenza enxanxathela yezitolo. Khuthaza izithombe ezifakiwe, usayizi akufanele weqe u-5 ″ x ”7 ″. Izithombe nozimele ngeke kubuyiswe.
Okuqukethwe: Letha izingane ukuthi zigqoke imvunulo ezokukopela noma ukujabulisa ngokuphepha phakathi kwezimoto nezindawo ezikhangayo epaki.
Okuqukethwe: Joyina iValero neCorpus Christi Museum of Science and History futhi uchithe usuku olugcwele isayensi, ubuchwepheshe nobumnandi bobunjiniyela bomndeni wonke! Kuzoba nemicimbi ekhangayo ye-STEM, ukusebenza kwesayensi, ukusebenza kwe-planetarium, i-Museum Live! nezaphulelo ezitholakalayo ukuthengwa.
Okuqukethwe: Woza uhlobise ithanga ngesiqeshana! Penda, uhlobise noma uqoshwe! Letha ithanga lakho noma ulithenge esiqeshini. Izivakashi ziyakhuthazwa ukuthi zizilethele ezazo izinto zokuhlobisa, kepha sizoba nezinye izinto esizisebenzisayo. Uma ugula noma omunye omaziyo egula, ngicela uhlale ekhaya.
Ini: UBoo Bash ubuyile kulo nyaka, futhi kungcono kunakuqala. Wonke umuntu umenyelwa emcimbini osepaki kamasipala ngoMgqibelo, Okthoba 23 kusuka ngo-6 kuya ku-9 ebusuku. Kuzoba nobumnandi, imidlalo, umculo obukhoma nokukhohlisa noma izindlela zomgwaqo.
Okuqukethwe: Okwesithathu Coast Athletics yamukela wonke umuntu ukuthi abambe iqhaza kwi-Halloween Carnival naseTrunk noma kuTreat. Lokhu kuvulekele wonke umphakathi, lapho uzothola khona imidlalo nemisebenzi eminingi ethokozisayo. Kuzoba nabathakathi abaphonsa izigqoko nezindandatho, izilo zingashaywa phansi, i-ghost bowling, imincintiswano yemvunulo nokuningi! Thenga ama-snacks afana ne-popcorn, marshmallows, namazambane amazambane. Bese ushiya amapotimende noma izindlela zokwelapha kusuka ngo-7pm kuya ku-8pm
Okuqukethwe: Joyina iSk8land embukisweni womoya we-Halloween waminyaka yonke! Ifaka ukushushuluza eqhweni, imidlalo yokugqoka imvunulo, imidlalo yokugoqa omama, nokukhasa kukaswidi.
Ini: ICorpus Christi Hooks iphonsa isipelingi e-Whataburger Field! Izingwegwe ze-Halloween ezinikezwe yi-HEB zizobuya ngo-Okthoba 28! Phuma ngo-7 ebusuku ukuze ubambe iqhaza emisebenzini ebukhoma yamahhala, ephephile, futhi ejabulisayo, efaka ubuqili noma ukwelashwa, imidlalo yomkhosi, amadokodo ezithombe kanye ne- “Hocus Pocus” kumabhodi evidiyo. Ukudla kwenkundla ye-baseball, amanzi kasoda nobhiya kuzotholakala ukuze kuthengwe. Khuthaza ababekhona ukuthi banikele ngokudla okusemathinini ku-Coastal Bend Food Bank, ethole ukudla okungaphezu kwamakhilogremu angama-400 eminyakeni embalwa edlule.
Okuqukethwe: Joyina i-Hot Z95, i-Rock 92/7 ne-1440 KEYS, bazokhipha amathanga angama-500. Kuzoba nomncintiswano wezingubo, abathengisi abangaphezu kuka-20, izipho nokunye. Lo mcimbi we-drive-thru uzovulelwa umphakathi mahhala, kepha izivakashi kudingeka zihlale ezimotweni zazo ngesikhathi somcimbi. Imoto ngayinye izothola okungenani ithanga elilodwa, kuyilapho amasheya ehlala.
Indawo: Indawo yokupaka phakathi kweSiphepho u-Alley neBrewster Street Ice House, eN.Tancahua St. phakathi kweBrewster St. ne-E. Port Ave.
Okuqukethwe: Joyina amahlaya athandwa kakhulu futhi uhlanganyele kumakhomikhi awo wokuqala we-Halloween nomkhosi weqoqo! Lokhu kuzoba umcimbi omuhle, ngokuthengisa okuhle nokujabulisayo, kufaka phakathi izincwadi zamahhala ze-Halloween Marvel, isaphulelo esingu-20% ezincwadini eziyisihluthulelo, imibuzo engu-50% eyedlule kusuka ku-silverware kuya ezikhathini zanamuhla, ama-doll angu-15% nezithombe, kufaka phakathi inguqulo entsha. Ngaphezu kwalokho, kuzothengiswa yonke imvunulo enetimu esabekayo, nezipho zamahhala usuku lonke, nemincintiswano yokugqoka. Abantu abangu-20 abaphezulu emgqeni bazophinda bathole ithikithi lesipho esikhulu esikhethekile.
Okuqukethwe: Joyina iCamp Aranzazu futhi ujabulele ukuzijabulisa komndeni okunobungane bangaphandle! Gqoka izingubo zakho futhi ujabulele intambama egcwele ubuciko, izibiliboco, izintaba eziqondiswa nguwe nokuningi! Yonke imisebenzi izokwenzeka ngaphandle kwekamu. Ngesikhathi sekamu lase-Alanzazu, zonke izivakashi nabasebenzi kufanele bagqoke imaski noma izihlangu zobuso.
Yini: IRialto Theatre izosingatha i-Aransas Pass Zombie Walk ngoMgqibelo, Okthoba 30. Yini oyibuzayo ngokuhamba ngezombi? Yebo, ukuhamba kwe-zombie kungumsebenzi. Abantu abaningi bagqoka njengamaZombi futhi babonakale emgwaqweni, njengalapho ungena kumovie yeRomero. Gqoka imvunulo yakho enhle futhi ujoyine uhambo oluzoqala luphele enkundleni yemidlalo. Mema abantu babo bonke ubudala. Kuzoba nomncintiswano wezimpahla futhi ungabuka i-movie elungele umndeni ngemuva kokuhamba.
Okuqukethwe: INueces Brewing Company ibamba amaqembu e-Halloween kanye nokuzingelwa komcebo edolobheni lonke. Kuzoba nemincintiswano yezingubo zokugqoka, ukukhishwa kukabhiya, namaswidi, amaswidi, amaswidi!
Okuqukethwe: I-Bank of America Center izokwethula ukubukwa okuhlanganyelwayo kwe- "Rocky Horror Show" eSelena Auditorium ngo-Okthoba 30, kufaka phakathi abalingisi ababukhoma, izikhwama ze-gag, ama-cocktails akhethekile, njll. Woza ebhodini uzobona ukuthi yini ekuthebhulethi! Umnyango uvulwa ngo-7 ntambama bese ukuprakthiza kuqala ngo-8 ebusuku Lo mcimbi uba sezingeni elingu-R. Noma ngubani ongaphansi kweminyaka engu-17 akavunyelwe ukungena kule ndawo ngaphandle uma ephelezelwa ngumzali noma umbheki.
Isikhathi Iposi: Oct-11-2021